Dargaggootaf Talaallii Kennuu | Washington State Department of Health
Dargaggootaf Talaallii Kennuu
Qabiyyeen yeroo dhumaa kan haaromfame May 20, 2022
Talaallin COVID-19 namoota umuriin isaanii waggaa 5 fi isaa ol ta'eef jira. Dargaggoonni umuriin isaanii 5 irraa kaasee hamma 17 ta'e talaallii Pfizer qofa argachuu malu. Yeroo kanatti namoota umuriin isaanii waggaa 18 gadi ta’eef talaalliin COVID-19 kan biraan hin eyyamamne.
Nagenyummaa & Bu'a Qabeessummaa Talaallii
Daa'ima keessan talaallii COVID-19 akka fudhatan gochuun kan armaa gadii godhuu danda'a:
Balaa COVID-19 tin qabamuu hir'isuuf gargaara
Yoo isaan COVID-19'n qabaman carraa sirriitti dhukkubsachuu isaaniii ni hir'isa
Carraa hospitaala ciisuu isaanii ni hir'isa, akkasumas balaa COVID-19 dhan du'uu isaanii ni hir'isa.
Gosa COVID-19 haaraatin akka hin qabamne isaan ittisuuf gargaara
Hawaasa COVID-19'n akka hin qabamne eeggamanitti akka dabalamtan kan isin taasisu yoo ta'u, dhibichi akka hin tatamsaane godha
Tata'imsina hawaasaa COVID-19 dhorkuu gargaaruf rakkoowwan qaamaan barachuu fi sochiiwwanii ni hir'isa
Daa'imman umurii 5-11
Tilmaaman daa'imman umurii 5 hamma 11 ta'an 3,100 (Ingiliffa qofaan) yaaliiwwan kilinikaa keessatti talaallii COVID-19 Pfizer fudhataniiru. Qorannicha itti fufaa jiru keessatti miidhaawwan cinaa cimaa hoomtu hin argamne.
Deebiiwwan dandeetti dhukkuba ittisuu daa'imman umurii 5 hamma 11 ta'anii kan namoota umurii 16 hamma 25 ta'anii wajjiin dorgomaa turan.
Talaallichi daa'imman 5 hamma 11 ta'an irratti COVID-19 hir'isuu irratti gara 91% bu'a qabeessa ture.
Daa'imman umurii 12-15
Hirmaattonni 2,260 umurii 12 hamma 15 ta'an (Ingiliffa qofaan) United States keessatti yaalii kilinikaa itti fufaa carraan gareetti ramadamuu, kan garee lamaatif galma'aniiru.
Kanneen keessaa, hirmaattonni dardaroota ta'an 1,131 talaalicha fudhataniiru, akkasumas 1,129 saline placebo fudhataniiru. Hirmaattonni walakkaadhaa ol ta'an hamma qorichaa lammaaffatti aanee yoo xiqqaate ji'oota lamaaf nageenyummaadhaf hordofamaa turan.
Talaalliin Pfizer Emergency Use Authorization (EUA, Eeyyama Itti Fayyadama Hatattamaa), irratti hunda'uun ijoollee umurii 5-15 ta'aniif jira akkasumas umurii 16+ guutumaa guututti mirkana'eera.
EUAn Food and Drug Administration (FDA, Bulchiinsa Nyaata fi Qoricha) eeyyama guutuu qabachuu isaatin dura yeroo hatattamaatti omishni akka jiraatu ni eeyyama. Kaayyoon eeyyamni itti fayyadama hatattamaa xiinxala yeroo dheeraa deetaa dura namoonni talaalliwwan lubbuu baraaran akka argatan mirkaneessuudha. EUA madaallii deetaa kilinikaa baay'ee cimaa ta'e yeroo gabaabadhaf ammas ni gaafata.
EUA kan FDA dhan hayyamni kennameef kamiyyuu Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Giddu Galawwan To'annoo fi Ittisa Dhukkubbiikan Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, Koree Gorsituu Gochaawwan Talaallii) (Ingiliffa qofaan) fi Western States Scientific Safety Review Workgroup (Garee Hojii Madaallii Nageenyummaa Saayinsii Isteetiiwwan Lixaa)tin ni qoratama jechuudha.
Maatiiwwanii fi Guddiftootaf gaaffilee yeroo baay'ee gaafatama
Waa'ee daa'imni kiyyaa COVID-19 tin qabamuu maalif yaada'uun narra jiraata?
Weerarri yeroo eegale irraa jalqabee, Yunaayitid Isteet keessatti daa'imman miliyoona 12 ol ta'an COVID-19 dhan qabamaniiru. Gosoonni COVID-19 haaraan gosa isa jalqabaa caalaa hamaadha akkasumas dargaggootatti dhibee fidu, dabalataanis dargaggoonni hospitaala seenanii wallaansa COVID-19 argatan akka gar-malee dabalan taasisa.
COVID-19 ga'eessota caalaa daa'imman keessatti yeroo baay'ee caalmatti salphaa ta'us, daa'imman ammas baay'ee dhukkubsachuu fi Hiriyoota fi maatii dandeettiin dhukkuba ittisuu isaanii dadhabaa ta'e ykn karoorawwan birootin saaxilamoo ta'anitti dabarsuu danda'u.
Daa'imman COVID-19 tin qabaman “COVID-19 dheeraa” ykn dadhabbii sammuu, dadhabbii, bowwuuwwan mataa, janja'uu fi hafuurri adda cituu dabalatee mallattoowan adda hin cinne saaxilamuu danda'u. Talaalliin daa'imman fayyaa kan qabanii fi nageenya isaanii eeguf talaallin mala hunda caalaa filatamaadha.
Daa'imman COVID-19 tin qabaman carraan saaxilama for Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS-C, Mallattoo Dhukkubii Sirna baay'ee) (Ingiliffa qofaan) tif qaban guddaadhabalaa ulfaataa ta'u mala. MIS-C haala onnee, somba, kaleewwan, sammuu, googa, ijoota ykn qaamota mar'imman garaa dabalatee kutaawwan qaamaa garagaraa itti dhukkubsataniidha. Wanti MIS-C dhaf sababa ta'u ammallee beekamuu baatus, daa'imman baay'een MIS-C dhan qabaman COVID-19 qabu ykn nama COVID-19 tin qabame cinaa turan. MIS-C cimaa ta'uu danda'a, garuu daa'imman baay'een haala kanaan qabaman wal'aansa fayyaatin itti fooyya'eera.
Talaallichi daa'imman mana barumsa oolma daa'immanii K-12 seenaniif ni barbaachisaa?
Department of Health (Qajeelcha Fayyaa) utuu hin taane, Washington State Board of Health (Boordiin Fayyaa Isteetii Waashingitan) ijoollee mana barnootaa K-12 keessa jiraniif ulaagaa talaallii fudhachuu qopheessuuf aangoo qaba Revised Code of Washington (RCW, Seerota Waashingitan Fooyya’an) 28A.210.140. Yeroo kanatti Talaallii COVID-19’f ulaagaan mana barnootaaf yookaan oolmaa daa’imaaf bahe hin jiru.
Talaallichaaf kaffaluutu narraa eegamaa?
Lakkii. Daa'imni keessan baasii tokko malee talaallii ni argata. Mootummaan federaalaa gatii talaallii guutuu isaa ni kaffala.
Inshuraansii fayyaa kan mootummaa yookin dhuunfaa yoo qabaattan, dhiyeessan talallii keessan kaffaltii talaallii kennuutif isaan kaffalchiisuu mala. Inshuraansii hin qabdan yoo ta'e, mootummaan federaalaa talaallii keessan akka galmeessuu sagantaa dhiyeessichaaf kaffalu ni dhiyeessa.
Kaffaltii talaallii COVID-19 kennnuutif kiisii keessanii baasuu hin qabdan yookin dhiyeessaa keessan irraa nagahee kaffaltii fudhachuu hin qabdan. Kuni namoota inshuraansii dhuuunfaa qaban, Apple Health (Medicaid), qaban, Medicare qaban, inshuraansii hin qabne irratti hojiirra oola.
Daa'imman irratti miidhaawwan cinaa COVID-19 baraman maal faadha?
Rakkoowwan fayyaa yoo daa'imman COVID-19 qabaman rakkoo miidhaawwan cinaa talaallii irra baay'ee caaluu.
Akkuma talaalliwwan biroo, miidhaawwan cinaa baramoon dhukkubbii irree, dadhabbii, mataa bowwoo fi dhukkubbii maashaa fa'i. Mallattooleen dhukkubaa kanneen yeroo baay'ee salphaa kan ta'aniidha.
Yaaliiwwan kilinikaa keessatti (Ingliffa qofaan) daa'imman caalmaatti miidhaawwan cinaa kan gabaasan hamma qorichaa jalqabaa booda caalaa hamma qorichaa lamaffaa booda. Miidhaawwan cinaa walumaagalatti ciminaan salphaa irraa hamma giddugaleessaa kan turan yommuu ta'u erga talaallii fudhatanii booda guyyoota lama keessatti mul'atu akkasumas baay'een isaanii guyyoota tokko hamma lamaa keessatti ni badu.
Talaallii Pfizer keessatti qabiyyee maal faatu argama?
Qabiyyeewwan talaallii Pfizer keessatti argaman talaalliidhaf sirriitti kan baramaniidha. Talaalliichi qabiyyeewwan biroo kan akka coomaa, ashaboo fi sukaaraa kan qabiyyee si'ooftu eegan, qaama keessatti sirriitti akka hojjetu taasisanii fi talaalicha yeroo kuusaanii fi geeji'an eeguuf kan oolan wajjiin qabiyyee si'ooftuu mRNA of keessatti qabata.
Talaallin Pfizer seeliwwan namaa (seelii miciree dabalatee), vaayirasii COVID-19, latex, tursiistuu yookin oomishtoota foonii ykn gelatin dabalatee omisha haftee beeylada of keessaa hin qabu. Talaalliwwan hanqaaquu keessatti kan hin guddaannee fi oomishtoota hanqaaquu kamiyyuu of keessaa hin qabu.
Odeeffannoo dabalataa waa'ee qabiyyeewwanii argachuuf Gaaffi&Deebii; Marsariitii Children's Hospital of Philadelphia (Hospitaala Daa'immanii Filaadalfiyaa) (Ingiliffa qofaan) daawwadhaa.
Daa'imni kiyya talaalli gosa kam fudhachuu danda'a?
Daa'imman umurii 5 hamma 17 jiraniif kan eeyyamamu talaallii COVID-19 Pfizer-BioNTech (Pfizer) qofa. Yeroo kanatti namoota umurii waggaa 18 gadiitiif talaalliin COVID-19 kan biraan hin eyyamamne.
Daa'imni kiyya doozii dandeettii dhibee ittisuu dabalu isa/ishee ni barbaachisaa?
Yeroo amma kanatti, dooziiwwan humneessituu talaallii namoota umurii 5 fi isaa olii ta'an qofaaf gorfama. Namoonni umurii 17 fi isaa gadi ta'an doozii humneessituu talallii Pfizer qofa fudhachuu danda'u.
Mucaan kiyya dooziiwwan meeqa barbaada/ddi?
Daa'imman hundi yoo xiqqaate dooziiwwan 2 akka fudhatan ni gorfamu. Dooziiwwan dabalataa waqtaawaa akka ta'aniitti akka ilaalaman gorfamuu danda'u.
Daa'imman umuriin 5-11 isaanii ta'e doozii daa'immanii fudhatu, kunis hamma gosa ijoollee fi ga'eessaa irraa adda.
Daa'imman umuriin isaanii 12-17 ta'e hamma qorichaa ijoollee fi ga'eessaf ulaagaa ni guutu.
Ijoolleen umriin isaanii waggaa 5 fi isaa olii kan dandeettii dhibee ittisuu haala giddugaleessa ykn cimaa ta’een miidhame qaban lilmoo doozii 2ffaa erga fudhatanii booda doozii jalqabaa dabalataa guyyoota 28 booda fudhachuu qabu; akkasumas ijoolleen umriin isaanii waggaa 5+ tahan doozii isa dhumaa erga fudhatanii baatiiwwan. Dooziwwan dabalataa gareewwan birootif gara fuulduraatti gorfamuu danda'u.
Maaloo namoota sirni ittisa dhukkubaa isaanii miidhamaa ta’e ilaalchisee qajeelfamoota Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Jiddugalawwan Too'annoo fi Ittisa Dhibee) yokiin immoo marsaaratii DOH ilaalaa.
Waa'ee talaallichaa irratti gaaffilee yoon qabaadhe eenyuuti haasa'uun qaba?
Ogeessa fayyaa daa'ima keesaaniitti ykn dhiyeessaa wal'aansaa amanamaatti haasa'aa, hojjattoota fayyaa hawaasatti haasa'aa ykn odeeffannoo www.CovidVaccineWA.org irratti dubbisaa.
Talaallin umurii 5-11 tif ta'u talaallii 12+ dhaf ta'u wajjiin tokkoo?
Talalliin Pfizer-BioNTech umurii waggaa 5–11 jiraniif ta'u qabiyyeewwan talaalliitin tokko, garuu hamma qoricha xiqqoo kan hammaan tokko sadaffaa ta'eedha.
Oomishni ammaa kan ga'eessotaa fi ijoolleedhaf oolu daa'imman umurii 5-11 ta'an irratti fayyadamamuu hin qabu.
Daa'ima kiyyaaf talaallii eessattan argachuu danda'a?
Isteetin Waashingtan daa'imman umuriin isaanii hamma 18 ta'aniif talaalliiwwan gorfaman hunda kaffaltii malee dhiyeessa. Ogeessi fayyaa daa'imaa keessanii ykn kilinikni idilee talaallii COVID-19 qabaachuu isaanii gaafadhaa.
Maatiiwwan kanaan dura dhiyeessaa tajaajila fayyaa hin qabne lakkoofsa bilbilaa Help Me Grow WA Hotline 1-800-322-2588 irratti bilbiluun yookaan gara ParentHelp123.org deemuun dhiyeessii tajaajila fayyaa, kilinika, yookaan qabeenyota fayyaa kan biraa argachuu danda’u. Tajaajilli kuni bilisa, akkasumas gargaarsi afaanii jira.
Dabalataan VaccineLocator.doh.wa.gov daawwachuun filtuu fayyadamtanii iddoowwan isinitti dhiyaatan kan talaallii ijoollee qaban argachuu dandeessu.
Daa'imni kiyya talaalliiwwan biroo kan akka Flu jiran yeroo fudhatan talaallii COVID-19 fudhachuu ni danda'uu?
Eeyyee. Daa'imni keessan yeroo talaalliwwan biroo fudhatan talaallii COVID-19 fudhachuu ni danda'u.
Talaalliwwan mana baruumsaa dirqama ta'an (Ingliffaa qofaan) kan daa'ima keessanii yookin talaallii COVID-19 irraa adda baasun talaalliwwan gorfaman kanneen biroo beellamuun isini hin barbaachisu. Talaallii COVID-19 tif beellama qabachuun, daa'imni keessan talaalliwan gorfaman isaanii hunda akka fudhataniif carraa gaarii uuma.
Talaalliin COVID-19 daa'imni kiyya eegumsa daa'imaa ykn kaampiiwwan daa'immanii irratti hirmaachuf ni barbaachisaa?
Washington State Board of Health (Ingliffaa qofaan) manneen barumsaatii fi eegumsa daa'imaatif talaalliiwwan kam faatu akka barbaachisan ni murteessa. Yeroo kanatti talaallin COVID-19 mana barumsaatif ykn eegumsa daa'imaatif barbaachisu hin jiru.
Kaampiiwwan daa'immaniitif, ulaagaaleen isaanii maal akka ta'e baruuf dhaabbata kaampicha hojjechiisuu irra mirkaneeffadhaa.